Mofomamy dibera misy alemana - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Mofomamy dibera misy alemana
Desayuno170 minitraOlona 10310 kaloria
Te handany fotoana kely amin'ny mofomamy spaonjy ve ianao? Eny, ity fomba fahandro ity dia miaraka amina fluffiness manokana sy ny famaranana miaraka amin'ny tsiro poeta lehibe.
Hanokana ora vitsivitsy izahay hamelana ny koba hiakatra ary amin'izay dia hisy famaranana amin'ny kilasy voalohany. Tsy vao sambany isika manamboatra an'io karazana fomba fahandro io amin'ny famaranana mitovy amin'ny mofomamy.
Amin'ny fanarahana ireo dingana amin'ity mofomamy ity dia afaka mahazo azy io amin'ny fotoana voalohany ianao. Azonao atao ihany koa ny manarona azy amin'ny crusty crust an'ny crème vita amin'ny dibera sy siramamy izay hampahatsiahy anao ireo mofomamy alemana mahazatra.
1 Mofomamy dibera misy alemana
Aza adino ny fomba fanaovana an'ity mofomamy spaonjy ity amin'ny hafanana lehibe. Hosaroninay crème crunchy vita amin'ny dibera sy siramamy ity mofomamy ity. Ho gaga ianao amin'ny tsirony.
Fotoana fiomanana: 2h 20M
Fotoana hiketrehana: 30M
Fotoana manontolo: 2h 50M
480 g ny lafarinina varimbazaha
Atody lehibe 2 ary nokapohina
Dibera 120 g, atsonika
7 g masirasira an'ny mpanao mofo maina
Ronono mafana 200 ml (tsy mafana)
Krema siramamy sy dibera
Dibera malefaka 50 g
Mitrandraka lavanila 1 sotro fihinanana
Krim-kapoka 150 ml
Ao anaty veranay dia ampiantsika ny ronono mafana 200 ml (tsy mafana), ny siramamy 40 g ary ny masirasira an'ny mpanao mofo maina 7 g. Nokapohinay izy tamin'ny alàlan'ny fandaharana 10 segondra tamin'ny hafainganam-pandeha 3 ary avelao hiala sasatra mandritra ny 10 minitra.
Ampio ny atody roa nokapohina, ny dibera meloka 120 g, ny ronono 200 ml, ny sira sy ny zipo-boasary. Afangaroinay amin'ny alàlan'ny fandaharana mandritra izany 5 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3. Ampio ny lafarinina varimbazaha 530 g ary andramo indray 2 minitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny fametahana.
Ampiarahinay ny lafarinina sisa (ny 50 g) ary farany mametafeta azy mandritra izany 2 minitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny fametahana. Avelantsika ao anaty vera hiala sasatra mandritra ny adiny 1.
Manomana lasitra mofomamy boribory izahay izay azo esorina mora amin'ny lasitra. Rehefa atsangana ny koba dia apetratsika ao anaty lapoaly ary hivelatra amin'ny tanantsika. Manarona lamba azy izahay ary mamela azy hiala sasatra mandritra ny 20 minitra. Raha afaka manafana ny lafaoro hatramin'ny 180 ° isika.
Ao amin'ny verantsika madio no hanamboarantsika ny crème izay handrakotra ny mofomamy. Ampio ny siramamy 120 g, ny sotro fihinana vanila iray sotro ary ny dibera malefaka 50 g. Mandrindra izany mandritra ny fotoana 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 2.
Ao amin'ny koba izay ao anaty vilany no hanaovantsika lavaka amin'ny paompy hazo. Hosaronantsika dibera sy fifangaroan'ny siramamy ny koba ary apetraka ao anaty lafaoro mandritra ny 20 minitra.
Vantany vao vita isika dia esorintsika avy eo amin'ny lafaoro, atsofoka ao indray ary arotsantsika eo anelanelan'ny lavaka ilay crème. Averinay ao anaty lafaoro mandritra ny 10 minitra izany. Tokony ho sosona mena sy mangatsiaka izy io. Hosokafantsika izany, avelao hampangatsiatsiaka ary afaka manompo amin'ny ampahany isika.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: General, Postres, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Mofomamy dibera misy alemana
Salama, ity resipeo ity dia tsy voamarina tsara, ao amin'ireo akora mametraka lafarinina betsaka ary ao anaty horonantsary iray hafa, avy eo amboniny dia tsy mametraka ilay ronono 200 ml, raha fintinina kely dia nahasosotra aho, omaly no nanaovako azy ary izaho dia tsy resy lahatra amin'ny valiny, mivoaka ny mofomamy tena matevina ...
Alicia tomero dia hoy izy:
Salama Javier. Eny, voaomana tsara ny lafarinina, ny mitranga dia ampiana indroa izy. Amin'ny 530g voalohany ary amin'ny faharoa ny ambiny: 50g. Tsy maintsy avelanao hamboarina tsara ny koba, zava-dehibe izy io mba hamontsina be. Misaotra tamin'ny hevitrao.
Valiny tamin'i Alicia Tomero
Voanjo miaraka amin'ny voatavo sy chorizo
Artichokes miaraka am ham